March 3, 2017 - Sawirrotv
Daily Archive for: 'March 3rd, 2017'
Xildhibaan Hadda ka hor Lagu Garaacay Madaxtooyada Hargeysa oo Aflagaado u Gaystay Madaxweyne Farmaajo (VIDEO)
March 03, 2017 – Xasan Cawaale Cadnaan oo kamid ah Xildhibaanada Aqalka hoose ee Baarlamaanka Soomaaliland ee laga soodoortay Magaalada Gabiley ayaa Sheegay in Maanta lagu dhax garaacay xarunta Madaxtooyada Soomaaliland. Xildhibaankan ayaa saxaafada hadalo Aflagaado ubadan hawada umariyay Madaxweynaha Dowlada Fadaraalka Soomaaliya Maxamed C/laahi Farmaajo. Xildhibaan Cadnaan ayaa Sheegay inuu garaacay Taliyaha Ciidanka ilaalada …
Xidhibaankii Aflagaadeeyay Farmaajo (VIDEO)
Xildhibaankan ayaa saxaafada hadalo Aflagaado ubadan hawada umariyay Madaxweynaha Dowlada Fadaraalka Soomaaliya Maxamed C/laahi Farmaajo. VIDEO – 1 VIDEO – 2 Xildhibaan Cadnaan ayaa Sheegay inuu garaacay Taliyaha Ciidanka ilaalada ee Aqalka Madaxtooyada Soomaaliland iyagoo kadibna ay jirdil usii gaysteen ciidamo isaga la joogtay, waasida uu hadalka u dhigaye. Xildhibaankan oo Hadda ka hor La …
Dhibaatada Haysata Dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku Xiran Dalka Hindiya iyo Qareen u Doodaya (VIDEO)
March 03, 2017 – Dalka Hindiya ayaa waxaa ku xiran dhalinyaro Soomaaliyeed oo tiradooda gaarayso ilaa 118, iyagoo badanaa dhalinyaradani loo haysto burcadbadeednimo. Xaalada Nolosha dhalinyaradani ayaa waxaa ka sheekeeyay, wiil Soomaali ah oo ku dhashay dalka Holland oo halkaasi kula xirnaa mudo sanad ah. Wiilkan ayaa sheegay in xaalada maxaabiista Soomaalida ay tahay mid …
Dhalinyarada ku Xiran Dalka Hindiya (VIDEO)
Xaalada Nolosha dhalinyaradani ayaa waxaa ka sheekeeyay, wiil Soomaali ah oo ku dhashay dalka Holland oo halkaasi kula xirnaa mudo sanad ah. Wiilkan ayaa sheegay in xaalada maxaabiista Soomaalida ay tahay mid aah u adag, waxana uu sheegay inay 30-30 qof ay ku seexdaan qolal yar yar.
Madaxweyne Farmaajo oo ka Hadlay Sababta uu u Xirtay Koofiyadda (VIDEO)
March 03, 2017 – Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane, Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa markii u horeysay ka hadlay sababta uu u xirtay koofiyadda aan lagu aqoon jirin. Madaxweyne Famaajo ayaa sheegay in wixii maanta ka bilaawda in uu yahay Nabadoon, uuna doonayo inuu isku soo dhaweeyo shacabka Soomaaliyeed. Madaxweynaha ayaa hadalkani ka sheegay casho …
Micnaha Koofida Madaxweyne Farmaajo (VIDEO)
Madaxweyne Famaajo ayaa sheegay in wixii maanta ka bilaawda in uu yahay Nabadoon, uuna doonayo inuu isku soo dhaweeyo shacabka Soomaaliyeed. Madaxweynaha ayaa hadalkani ka sheegay casho sharaf uu u sameeyay xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee Soomaaliyeed ugu suubiyay xarunta madaxtooyada (Villa Somalia) ee magaalada Muqdisho.
Somaliland oo ka Hadashay Codsigii Madaxweyne Farmaajo u Gudbiyaya Boqorka Sacuudiga (Dhagayso)
March 03, 2017 – Somaliland ayaa waxa ay markii u horeeyay ka hadashay codsigii Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya mudane, Maxamed C/laahi Farmaajo uu u diray Dowladda Sacuudiga, ee ahaa in dalka Imaaraadka Carabta uu joojiyo qorshaha uu saldhiga Millitari kaga dhisanayo Magaalo xeebeedka Berbera. Wasiir ku xigeenka madaxtooyada Somaliland Axmed Xaashi C/llaahi Wasiir oo warbaahinta la …
Nin Waday Gaari Walxaha Qarxa ay ka Buuxaan oo Lagu Qabtay Magaalada Gaalkacyo (VIDEO)
March 03, 2017 – Ciidamada ammaanka ee Maamulka Puntland ee ku sugan magaalada Gaalkacyo ayaa shalay casarliiqii waxa ay qabteen gaari xamuul ah oo laga soo buuxiyay walxaha qarxa, kaasi oo ku sii jeeday magaalada Boosaaso. Gaarigan siday Walxaha Qarxa ayaa noociisa waxa uu ahaa nooca Soomaalida ay u taqaano Candha-meedlaha, isagoo isaga kala gooshi …
Gaarigii Qaraxa Lagu Qabtay-Gaalkacyo (VIDEO)
Gaarigan siday Walxaha Qarxa ayaa noociisa waxa uu ahaa nooca Soomaalida ay u taqaano Candha-meedlaha, isagoo isaga kala gooshi jiray Magaalooyinka Boosaaso iyo Beledweyne, sida ay sheegeen saraakiisha ammaanka ee magaalada Gaalkacyo. Hadaba Daraawalkii waday Gaariga xamuulka ah ee lagu qabtay magaalada Gaalkacyo ayaa waxa uu ka sheekeeyay sida loo qabtay iyo Gaariga sida lagu …